မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောနှင့် တရုတ်ကုန်သည်များအပေါ် အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု အသစ်ချမှတ် - Yangon Media Group
မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောနှင့် တရုတ်ကုန်သည်များအပေါ် အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု အသစ်ချမှတ်
ဝါရှင်တန် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ၊ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်သင်္ဘောများနှင့် ယင်းနိုင်ငံ အစိုးရနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသော တရုတ်ကုန်သည်များကို ပစ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်များကို အမေရိကန် နိုင်ငံက နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ချမှတ်လိုက်ပြီး နျူကလီးယားအစီအစဉ်ကို စွန့်လွှတ်ရန် အထီးကျန်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ဖိအားပေးမှုများ တဖန်မြင့်တက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ယင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံက မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပေါ် နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းမှုကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အကြာတွင် အကြမ်းဖက်မှုကို အားပေးအားမြှောက်ပြုနေသော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် သမ္မတထရန့် ကြေညာခဲ့ပြီး တစ်ရက်အကြာတွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး စတီဗင် မနျူချင်က “အဲဒီစာရင်းသွင်းသတ်မှတ်မှုတွေထဲမှာ ဒေါ်လာသန်းကို ရာနဲ့ချီပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ပါဝင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပရိယာယ်များတဲ့ စစ်ရေးတွေကို အထောက်အပံ့ပြုနေတဲ့ သင်္ဘောလိုင်းနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီတွေ၊ သူတို့ရဲ့ သင်္ဘောတွေကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် တနင်္လာနေ့တွင် သမ္မတထရန့်က ယခုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ကြေညာချက်သည် ကင်ဂျုံအန်း၏ အုပ်ချုပ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဖိအားအများဆုံးပေးမည့် ကမ်ပိန်းအစီအစဉ်ကို အထမြောက်စေနိုင်မည့် လာမည့်သီတင်းနှစ်ပတ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ဆောင်မည့်များထဲမှ ပထမဆုံးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ခန့်မှန်းထားခဲ့သည့်အတိုင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေးကို ဆန့်ကျင်မည့် လက်ရှိအမေရိကန်လမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြုထားသော်လည်း ကုမ္ပဏီများနှင့် တသီးပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် တိုးချဲ့အရေးယူမှုပြုလုပ်ထားသည် ကိုတွေ့ရသည်။
မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောနှင့် တရုတ်ကုန်သည်များ အပေါ် အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု အသစ်ချမှတ်
တည်ဆောက်ဆဲ သုံးထပ်ဆေးရုံမှာ အရည်အသွေးမပြည့်မီသဖြင့် အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ကျန်းမာရေးနှ??
ဝင်ခွင့်အမှတ် ၅ဝဝ ကျော်ရှိခဲ့သည့် ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တစ်ရာဝ?
အောင်ဘာလေ ထီစာအုပ်များ ပျောက်ဆုံးမှု အရေးယူပေးရန် မကွေးစာတိုက်မှူး အမှုဖွင့်